Android Wear, kudzika uye pasina mabhureki | Ndinobva mac
Android Wear, kudzika uye hakuna mabhureki
Nzvimbo yeGoogle ine runyararo munzvimbo yemafoni yakanga yakawanda kupfuura chikonzero chakaringana chekutsvaga uye nharembozha yezvinhu zvipenyu kuti inyurure mukugadzira sisitimu yekushandisa yezvipfeko, chishandiso icho chioko chinokatyamadzwa neVashandisi.
Asi pamusoro pemakore, ivo vakomana veMountain View vaona kukamurwa kwakaiswa kune vagadziri kana zvasvika pakugadzirisa iwo Android Wear shanduro dzemidziyo yavo, pamwe chete nekukweva kudiki kune izvi zvishandiso, Kumanikidza vamwe vagadziri kuti varege kubheja kwete chete papuratifomu kwechinguva, sezvinoitika Motorola, imwe yekutanga kubheja pairi.
Iyo yekupedzisira hombe yekuvandudza ku Android Wear yakaunzwa zviri pamutemo muna Chivabvu wegore rapfuura asi Yakanga isiri kusvika pakutanga kwegore rino kuti yakatanga kusvika kumidziyo inoenderana. Kubva ipapo, zvishoma zvimwe zvakave zvichizivikanwa nezve icho chizvarwa chechitatu cheiyo Android Wear chinofanira kuve.
Iyo chete nhau ine chekuita nekushanduka kwepuratifomu iyi inowanikwa mu Android Wear mukuru mainjiniya kusiiwa, uyo ave chikamu chevashandi veStripe, yeplatform yekubhadhara chikuva.
Chief Injiniya Kurega inosimbisa kuti Android Wear inoda remodel yakazara, kwete mukushanda kwayo chete asiwo mukupa rusununguko rwakawanda kune vagadziri vanosarudza kuishandisa. Parizvino mawatchOS eApple uye Samsung Tizen ndiwo mapuratifomu anonyanya kushandiswa, pamusoro pe Android Wear.
Kana Google ichiramba isingaratidze zviratidzo zvehupenyu, zvinogona kunge zviri mune iri kure kure ramangwana, vagadziri vanoramba vachibheja pamawatchwatches, sarudza kutaurirana neSamsung uye wotanga kutora sisitimu yeKorea yekushanda, inoshanda sisitimu iyo inopa yakanyanya yakagadziriswa mashandisiro, mashandiro akanaka uye izvo parizvino zvine huwandu hukuru hwezvishandiso zviripo
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Android Wear, kudzika uye hakuna mabhureki
Ruzivo rwakakosha! Zvakanaka kuwana vanhu vachitaura nezvenyaya iyi, pasina kupokana, izvo zvinomutswa pano zvinoshanda. Ndine blog nezve Broadband Internet iyo kana iwe uchida kupinda, unogamuchirwa: https://goo.gl/zkmQoQ
Sangano reATTAC rinotora Apple Store muParis
Vanofungidzira kuti maMac anotakura mahwendefa eiyo iPhone X mukuburitswa kuri kuuya